Akụkọ - Gịnị ka ị ga -eme mgbe valvụ ahụ na -awụpụ, gịnịkwa bụ isi ihe kpatara ya?
Nke mbụ, mpempe mmechi ahụ na -ada ma na -akpata mgbapụta
Ihe kpatara ya:
1. Ọrụ adịghị mma na -eme ka akụkụ mmechi ahụ rapara ma ọ bụ karịa n'etiti etiti nwụrụ anwụ, njikọ ahụ mebiri ma gbajie;
2. Akụkụ mmechi ahụ ejikọtaghị nke ọma, tọpụrụ ma daa;
3. Ihe nke akụkụ njikọ ahụ adịghị mma, nke na -enweghị ike iguzogide mmebi nke ọkara na abrasion n'ibu.
1. Na -arụ ọrụ nke ọma, ejikwala ike imechi valvụ, wee mepee valvụ ahụ ka ọ ghara gafere etiti nwụrụ anwụ dị n'elu. Mgbe emepere valvụ ahụ nke ọma, a ga -atụgharị wiilị aka ahụ ntakịrị;
2. Njikọ dị n'etiti akụkụ mmechi na valvụ valvụ kwesịrị ịdị ike, na njikọ eri ahụ kwesịrị inwe azụ azụ;
3. Ihe njigide ejiri jikọta akụkụ mmechi na valvụ valvụ kwesịrị iguzogide nchara nke onye na -ajụ ase, ma nwee ogo ụfọdụ nke ike n'ibu ma na -eyi nguzogide.
Nke abụọ, mwepu nke mpụta na mbukota
1. Nhọrọ na -ezighi ezi nke mbukota, anaghị eguzogide corrosion na -ajụ, anaghị eguzogide valvụ elu nrụgide ma ọ bụ oghere, oke okpomọkụ ma ọ bụ ngwa okpomọkụ dị ala;
2. Enwụnyeghị ngwugwu ahụ n'ụzọ ziri ezi, enwere ntụpọ dịka iji dochie nnukwu na obere njikọ adịghị mma, ịgbatị na ịtọpụ;
3. Nkwakọ ngwaahịa ahụ akarịala ndụ ọrụ, kara nka ma tụfuo elasticity ya;
4. Ogwe valvụ adịghị elu na nkenke, ma nwee ntụpọ dịka ehulata, corrosion, na abrasion;
5. Ọnụọgụ nke mgbaaka mbukota ezughi oke na anaghị arụgide gland nke ọma;
6. A na -emebi gland, ihe mkpọchi na akụkụ ndị ọzọ, na -eme ka gland enweghị ike ịpịkọta ya;
7. Ọrụ adịghị mma, oke ike, wdg;
8. Akụkụ ahụ na -agbagọ agbagọ, oghere dị n'agbata gland na valvụ valvụ pere mpe ma ọ bụ buru oke ibu, na -eme ka valvụ ahụ yie ma ngwugwu mebie.
1. Ekwesịrị ịhọrọ ihe na ụdị mbukota dị ka ọnọdụ ọrụ si dị;
2. Wụnye ngwugwu ahụ n'ụzọ ziri ezi dịka ụkpụrụ ndị dị mkpa si dị;
3. A ga -edochi ngwugwu ejirila ogologo oge, ịka nká, ma ọ bụ mebiri emebi n'oge;
4. Mgbe ogwe valvụ na -ehulata ma ọ bụ eyi, ekwesịrị ịgbatị ya ma rụzie ya. Ọ bụrụ na ọ mebiri nke ukwuu, ekwesịrị idochi ya n'oge;
5. Ekwesịrị ịwụnye ngwugwu ahụ dị ka ọnụọgụ mgbaaka a kapịrị ọnụ, ekwesịrị ịgbatị gland na symmetrically na evenly, na uwe mkpakọ kwesịrị inwe oghere na-emechi karịa 5mm;
6. Ekwesịrị idozi ma ọ bụ dochie glands mebiri emebi, mkpọchi na akụkụ ndị ọzọ n'oge;
7. Ekwesịrị ịgbaso usoro ọrụ, ewezuga mmetụta aka, iji rụọ ọrụ na ọsọ ọsọ na ike nkịtị;
8. Ekwesịrị ịkechi ihe mgbochi gland n'ụzọ hà nhata na n'usoro. Ọ bụrụ na oghere dị n'agbata gland na valvụ valvụ pere mpe, ekwesịrị ịbawanye oghere ahụ n'ụzọ dabara adaba; ọ bụrụ na oghere dị n'agbata gland na valvụ valvụ buru oke ibu nke a ga -eji dochie ya.
Nke atọ, Leakage nke akara akara
1. Ala akara bụ ala na -ekwekọghị ekwekọ na ọ nweghị ike ị nweta ahịrị siri ike;
2. Akwụsịre etiti etiti njikọ n'etiti valvụ valvụ na akụkụ mmechi, ezighi ezi ma ọ bụ eyi;
3. Ogwe valvụ a gbagọrọ agbagọ ma ọ bụ zukọtara n'ụzọ na -ezighi ezi, nke na -eme ka akụkụ mmechi gbagọrọ agbagọ ma ọ bụ hie ụzọ;
4. Nhọrọ na -ezighi ezi nke ịdị mma nke ihe mkpuchi ala ma ọ bụ ọdịda ịhọrọ valvụ dịka ọnọdụ ọrụ si dị.
1. Họrọ nke ọma ihe na ụdị gasket dịka ọnọdụ ọrụ si dị;
2. Jiri nlezianya hazie ma rụọ ọrụ nke ọma;
3. Ekwesịrị ịgbachi bolts ahụ nha anya na nha anya, na ekwesịrị iji mkpọchi torque mgbe ọ dị mkpa. Ike a na-agbadosi ike kwesịrị iru ihe achọrọ ma ghara ịdị oke ma ọ bụ obere. A ga-enwerịrị ọdịiche dị n'etiti flange na njikọ eri ahụ;
4. Ekwesịrị ịhazi ọgbakọ gasket na etiti, na ike kwesịrị ịdị. A naghị ekwe ka gasket kpuchie ma ọ bụ jiri gasket abụọ;
5. Ala mkpuchi static emebiela, mebiri emebi, na nhazi nhazi adịghị mma. Ekwesịrị ịrụ ndozi, egweri, na nyocha agba iji mee ka akara akara static mezuo ihe ndị achọrọ;
6. Lezienụ anya maka nhicha mgbe ị na -etinye gasket. A ga -eji mmanụ ọkụ hichaa elu akara ahụ na ka nkata gasket ekwesịghị ịda n'ala.
Nke anọ, ịwụfu na njikọ nke mgbaaka akara
1. A naghị akpọgide mgbanaka akara ahụ nke ọma;
2. A na -agbakọ mgbanaka akara ahụ, mana ịdị elu ya adịghị mma;
3. Eriri njikọ mgbanaka akara ahụ, ịghasa na mgbanaka mgbanaka rụrụ arụ;
4. A na -ejikọ mgbanaka akara ahụ ma mebie ya.
1. Mgbafu dị na mpaghara mpịakọta ahụ mechiri emechi ga -etinye ya na nrapado wee tụgharịa ma dozie ya;
2. Ekwesịrị ịrụzi mgbanaka akara dịka nkọwapụta ịgbado ọkụ si dị. Mgbe enweghị ike ịrụzi ịgbado ọkụ n'elu, ekwesịrị wepu mpụta mbụ na nhazi ya;
3. Wepụ kposara na mgbanaka mgbanaka iji hichaa ma dochie akụkụ ndị mebiri emebi, gwepịa akara akara na oche njikọ, wee kpọkọta ọzọ. Maka akụkụ nwere nnukwu mbibi corrosion, ịgbado ọkụ, njikọta na ụzọ ndị ọzọ enwere ike iji rụzie ya;
4. Ọ bụrụ na elu njikọ nke mgbanaka akara ahụ emebiwo, enwere ike idozi ya site na -egweri, njikọta na ụzọ ndị ọzọ. Ọ bụrụ na enweghị ike idozi ya, ekwesịrị idochi mgbanaka akara.
Nke ise. Mgbapu nke ahụ valvụ na mkpuchi valvụ:
1. Ogo nke ihe nkedo igwe adịghị mma, enwere ntụpọ dị ka ọnya, nhazi rụrụ arụ na itinye slag na ahụ valvụ na mkpuchi valvụ.
2. Weather ifriizi cracking;
3. ịgbado ọkụ na-adịghị mma, enwere ntụpọ dị ka ntinye slag, ịgbado ọkụ, mgbakasị mgbaka, wdg;
4. A na -emebi valvụ nkedo mgbe ihe dị arọ kụrụ ya.
1. Meziwanye ogo nkedo, ma mee nnwale ike dị ka iwu siri dị tupu echichi;
2. Maka valvụ na -arụ ọrụ na -erughị ogo Celsius, ekwesịrị idobe ha ọkụ ma ọ bụ gwakọta ya na ọkụ, na valvụ na -adịghị arụ ọrụ kwesịrị ịwụpụ mmiri na -adịghị agwụ agwụ;
3. A ga -emerịrị akwa ịgbado ọkụ nke ahụ valvụ na ọkpọkọ nke ịgbado ọkụ dịka ụkpụrụ ọrụ ịgbado ọkụ dị. A ga -emerịrị nchọpụta ntụpọ na ule ike mgbe ịgbado ọkụ;
4. Amachibidoro ịkwanye na itinye ihe dị arọ na valvụ ahụ, a naghịkwa ekwe ka iji igwe aka were kụọ ihe nkedo na valvụ ndị na-abụghị ọla. A ga-ejikọ ihe nrụnye nke valvụ ndị nwere dayameta buru ibu.
Ogwe bọọlụ Trunnion, Valve Gate Gate, Igwe anaghị agba nchara Gate Gate valvụ, Igwe anaghị agba nchara bọl valvụ, Valve Gate Valve, Akuku Globe Valve,